Soomaali Cambaareysay Dilalka Al Shabaab ugeystaan Dad ay ku sheegeyn Basaaasiin…… |
Soomaali Cambaareysay Dilalka Al Shabaab ugeystaan Dad ay ku sheegeyn Basaaasiin……
Brand Viagra for sale, acquire lioresal. Dadka Soomaaliyeed ee ku nool goobaha ay ka taliso al-Shabaab ayaa sheegaya in dilalka kooxda xagjirka ah ay u gaysatay dadka lagu sheegay inay ‘jaajuusiin” u yihiin dowladda Soomaaliyeed iyo saxiibadood aan wax cadeeyn ah loo heyn ayna ka soo horjeedaan shareecada Islaamka
Kooxda ayaa dishay ilaa toddobo qof oo ay ku eedeeysay jaajuusnimo taniyo March, sida uu sheegay oday dhaqameed ka soo jeeda magaalada Baraawe oo joogay goobta lagu dilay saddex lagu sheegay jaajuusiin June 2-deedii.
Odayga, oo dalbaday in aan magaciisa laga sheegin warbaahinta isagoo ka cabsi qaba aarsi xagga al-Shabaab ah, ayaa u sheegay Sabahi in dilalka aysan waafaqsaneyn shareecada Islaamka ee saxda ah.
Dhallinyarada la dilay ayaa lagu magacaabay Saalax Fu’aad Cusmaan, oo 24 jir ah, Maxamed Cumar Diiriye, oo 22 jir ah iyo Maxamed Aadam Ibraahim, oo 26 jir ah, sida ay sheegtay Somalimemo oo al-Shabaab taageersan.
Sida ku qorneeyd qoraal laga akhriyay goobta toogashada, Cusmaan ayaa qorayay dad sirta u soo tabiya dowladda Soomaaliya, Diriye waxaa lagu soo eedeeyay in uu la shaqeynayay adeegyada sirdoonka Mareykanka waxaana Ibraahim lagu soo eedeeyay inuu jaajuus u yahay dawladda Kenya.
“Waxaan joogay goobta al-Shabaab sida sharci darrada ah ugu dishay saddexda nin ee dhallinyarada ah,” ayuu yidhi odayga. “Haddii aan nahay dadka deegaanka, aad ayaan uga naxnay. Tani waa mid aannaan taageersaneeyn.”
Saddexda dhibbane kama soo jeedin Barawe, qaraabana kuma lahayn magaalda, ayuu yidhi, isagoo ku daray in ay u badan tahay in hawlwadeennada al-Shabaab ay ka soo xireen magaalooyin kale ka dibna la keenay Barawe si loogu toogto.
Xaaladdan mid la mid ah ayaa May 13-keedii, al-Shabaab ku xukuntay Cabdixaamid Sheekh Xuseen oo ahaa 29-jir dil ka dib markii lagu soo eedeeyay in uu u jaajuusayay ciidamada Soomaaliyeed. Xuseen ayaa waxaa magaalada Baardheere ku toogtay kooxda toogashada iyadoo boqollaal dadka deegaanka ah ay joogeen.
March gudaheedii, al-Shabaab ayaa saddex nin oo kale ku toogatay gudaha Barawe, ayagoo ku eedeeynaya Axmed Cabdullaahi Farole, oo 47 hir ah iyo Cabdiraxmaan Cabdiladiif in ay u jaajuusayeen dowladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland iyo Maxamed Cabdulle Geele, oo 29 ji ahaa in u basaasayay hey’addaha sirdoonka Faransiiska iyo Maraykanka.
Raggan lama siin fursad ay isaga difaacaan eedeymaha, waxaana toogtay kooxda toogashada ka dib markii qaadi al-Shabaab ah uu ku xukumay dambiilayaal.
Dilalka shacabka ayaa loogu talagalay in lagu argagixiyo dadka deegaanka
Oldayga reer Barawe ah ee la hadlay Sabahi ayaa sheegay in al-Shabaab ay caadadeeda tahay in ay ku khasbaan dadka deegaanka in ay yimaadaan toogashooyinka si ay niyadda dadka shababka ah u galiyaan aragagax.
“Dadka ku nool Baraawe ayaa wax ay ka mid ah kuwa ugu awoodda yar bulshada sida haweenka, caruurta iyo waayeelka. Waxaa nalaku khasbaa in aan ka soo baxno guryaheena markasta oo ay al-Shabaab sameynayso toogashooyin,” ayuu yidhi.
Ku khasbida shacabka in ay daawadaan dilalka foosha xun ayaa keentay in ay waxyeesho caafimaadka maskaxda muwaadiniin badan, ayuu yidhi. “Caruurta qaarkood ayaa ku dhowaada in ay waashaan ka dib marka ay daawadaan qof la tooganayo ama gacanta ama lug laga goynayo. Haweenka uurka leh ayaa sidoo kale dareema [walwal].”
“[Al-Shabaab] ayaa xukun aan caddeeyn laheeyn ku ridda qof walba halkaasna waxaan ka fahmi karnaa in iyagu qof walba oo aaminsan fikrad ka duwan tooda in uu u xaggooda ka yahay basaas,” ayuu yidhi.
Barni Xasan, oo ah hooyo 31 jir oo toddobo caruur ah leh kuna nool Baardheere, ayaa tidhi al-Shabaab waxay toogteen Xuseen iyagoo aan bixin wax caddeeyn ah oo ku saabsan dambiyadaan lagu sheegay.
“Al-Shabaab nidaamkeeda garsoorka waxa uu ku saleysan yahay dano khaas ah. Dadka deggan Baardheere ayaa lagu khasbaa in ay isku soo baxaan sidii in uu jiro isoo bax nabad ah ka dibna waxaa lagu khasbaa in ay daawadaan sida al-Shabaab ay u dilayaan dadka,” ayay u sheegtay Sabahi.
“Waxaan rumeeysanahay in hadafkoodu yahay inay argagax ku ridaan dadka deegaanka waayo haddii ay daacad yihiin waxay shacabka tusi lahaayeen caddeeymaha ka dhanka ah dadka ay dilayaan,” ayay tidhi.
Barni ayaa ugu baaqday xukuumadda Soomaaliya iyo Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) inay si degdeg ah uga xoreeyaan argagaxa al-Shabaab.
Sheekh Axmed Daahir, oo ah imaamka Masaajidka Sheekh Cabdulqaadir ee degmada Xamar Weyne ee Muqdisho, ayaa sheegay inay xadgudub ku tahay diinta Islaamka in qof lagu xukumo toogasho iyadoo aysan ku marag furin ugu yaraan saddex markhaatiyaal ah.
“Marka hore, ma donayo inaan ka hadlo in ay xukunnada ay al-Shabaab ku soo saarto dadka masaakiinta ah ay yihiin kuwo sharci ah ama inaysan ahayn sababta oo ah waxaa cad inay u maleeyaan in qof walba oo aan la fikrad ahayn uu yahay kaafir u basaasa gaalada,” ayuu u sheegay Sabahi.
“Hase ahaatee, diinta Islaamka waxay si gooni ah u karaameeysay nafta bini’aadamka waana inay jiraan ugu yaraan saddex qof oo qofka lagu eedeeyay inuu basaasay Islaamka ku markhaati fura iyo waliba caddeeymo dheeraad ah,” ayuu yidhi. “Go’aannadan waxaa kaliya oo gaadhi karta maxkamad sharci ah ee ma sameeyn karaan maxkamadaha beenta ah ee al-Shabaab.”
Daahir ayaa sheegay inay la gudboon tahay culimada Soomaaliyeed inay hal go’aan oo wadajir ah ka gaadhaan kaasoo lagu dhaleeceeynayo sida ay al-Shabaab u gaarto xukunnadan, kuwaas oo ka soo horjeeda shareecada Islaamka.